အစ္စလမ် နှင့်အချိန် ၏ သဘောတရား – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
အစ္စလမ် နှင့်အချိန် ၏ သဘောတရား
Posted on November 28, 2011 July 14, 2012 by kyawkyawoo	Posted in TimeTagged (တရက် ၂၄ နာရီ = ၈၆၄၀၀ စက္ကန် ), အချိန်, အချိန်ဇယား, အချိန်သည်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်၏, အချိန်၏သဘောတရား, အစ္စလမ် နှင့်အချိန် ၏ သဘောတရား, အသိစိတ်အတွင်း, ဥစ္စာ ဖြုန်းတီးခြင်း, ကျော်ကျော်ဦး, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, Invitation to all Muslim Minorities, myanmar muslim minority, religion
အချိန် ၏ သဘောတရားသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်း၏။ ရူပဗေဒသဘော အရဆိုလျှင်အချိန်သည် အဖြစ်အပျက်တို့ကို တိုင်းတာသောယူနစ် တခုဖြစ်၍၊ ဒသန ပညာရှင်များအလိုအရအချိန်သည် လူ၏မှတ်ညဏ်ထဲတွင်သာရှိသောသဘာဝဟုဆို၏။
လူတဦး ၏ အသိစိတ်အတွင်း ၌သာ အတိတ်၊ ပစ္စုပန်၊အနာဂတ် ရှိ၍ အချိန်၏ နှိုင်းရသဘောတရားကို အိုင်းစတိုင်း ၏ ရီလေတီဗိတီ သီဝရီ က တသမတ်တည်းမရှိဟုသက်သေ ပြနိုင်ခဲ့သည်။
အလွယ်နားလည်အောင်ဆိုရလျှင် အလွန်စည်ကားတိုးတက်သော မြို့တော်ကြီးတွင် နေထိုင်၍
အလုပ်လုပ်ကိုင်သောသူတယောတ်အတွက်တနေ့တာအချိန်သည် အလွန်တရာမြန်ဆန်ပြီး၊ လူသူ
မရောက်မပေါက်သည့် ဇနပုဋ် တွင်နေသောနွားကျောင်းသားတဦး အတွက် အချိန်သည်အလွန်တရာနှေးကွေးပေမည်။
ထောင်တွင်အကျဉ်းကျနေသူတဦး အတွက်လွတ်ရက်ကို မျှော်၍ အလွန်ကြာမြင့်သည် ဟုယူ ဆမည်ဖြစ်သော်လည်း ထိုထောင်၏ အပြင်ဖက်တွင်နေထိုင်သူ အောင်မြင်သောစီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင်တဦးအဖို့တနေ့တာသည် အလွန်အချိန်တိုသည်ဟုမှတ်ယူပေမည်။
အချိန်၏ သဘောသည်သာမန်လူတဦးအဖို့မိမိ ၏ မှတ်ညဏ် မှ မှတ်မိသောဖြစ်ရပ်များကို နှိုင်းယှဉ်
စဉ်းစား ၍ ကြာသည် မြန်သည် ဟုမှတ်ယူသောသဘောဖြစ်၏။အကယ်၍ ထိုသူ၌ မှတ်ညဏ်မရှိပါကနှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားရန် အကြောင်းအရာမရှိ၍ အချိန်ဟုရှိမည်မဟုတ်ပေ။အိပ်ပျော်နေသူတဦး အိပ်ယာမှနိုးလာလျှင် ( အိပ်ချိန် ၈ နာရိရှိသော်လည်း)ရုတ်တရက် ပြန်ထလာသည်ဟုခံစားရသည်။
နာရီကို ကြည့်၍သာ မည်မျှကြာအောင်အိပ်သည် ဟုသိရသည့်သဘောကို ကြည့်ပါ။
၁။ အချိန်သည်အလွန်လျှင်မြန်စွာကုန် ဆုံး၏
ဘဏ်တခုကသင့်ကို ငွေ ၈၆၄၀၀ နေ့စဉ် အလကားပေးသည်ဆိုပါစို့။စည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်မှာ တရက်အတွင်းထို ပမာဏကို ကုန်အောင်သုံးရမည်။မသုံးပါက
တနေ့ကုန်လျှင် သုည ဖြစ်သွားမည် နောက်နေ့သို့ယူ၍မရဟုဆိုလျှင် မည်သူမဆို
တနေ့အတွင်း ငွေ ၈၆၄၀၀ ကို တပြားမကျန် သုံးကြမည်မှာသေချာ၏။
ကျွန်တော်တို့အား ငွေထက် တန်ဖိုးရှိ သော ၈၆၄၀၀ စက္ကန့် ကို ဖန်ဆင်းရှင်က
နေ့စဉ်ပေးနေ၏။မနက်တိုင်း ၈၆၄၀၀ စက္ကန် ရပြီးညတိုင်း ၈၆၄၀၀ စက္ကန် ကုန်ဆုံး
၏။ ကျွန်တော်တို့ မသုံးကြပါ။အလဟသဖြုန်းပစ်နေကြ၏။
(တရက် ၂၄ နာရီ = ၈၆၄၀၀ စက္ကန် )
မွတ်စလင်တိုင်းအတွက်အချိန်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖန်ဆင်းရှင် ကပေးအပ်သောတာဝန်
Islam ဘာသာဝင်တို့အတွက်အချိန်ပိုနေ၍ အချိန်ဖြုန်းသည်ဟုမရှိရပါ။ ဦးတည်ရာမဲ့
အင်တာနက်ပေါ်တွင်အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ အကျိုးမဲ့စကားများ ပြောရင်း အချိန်ဖြုန်းခြင်း
ဥစ္စာ ဖြုန်းတီးခြင်း က အစားပြန်ရနိုင်သော်လည်း အချိန် ကိုအစားပြန်မရနိုင်ပေ။မိမိ၏
အားလပ်သောအချိန်ဆိုသည်မှာမွတ်စလင်တို့ အတွက် မေ့လျော့နေသောတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်
ထို့ကြောင့် မွတ်စလင်တိုင်းသည်တန်ဖိုးရှိသောအချိန်များကို အလ္လာအရှင်မြတ်အား တသ
အေဘာဒတ်သ် ပြူခြင်း ဖြင့်၎င်း၊ သာသနာ့ အကျိုး လူသားအကျိုးအတွက်မပြတ်အား ထုတ်
အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ရန် စနစ်တကျ အချိန်ဇယား ဆွဲရန်လို၏။ဤလောက၏ တာဝန်
များအတွက်၎င်း၊ နောင်တမလွန်အတွက်ကြိုတင် ပို့မည့်ကောင်းမှူကုသိုလ် များအတွက် စနစ်ကျသော
အချိန်ဇယားရှိရန်လို၏။အရေးအကြီး ဆုံးအမှူကို အရင်ဆုံးပြူ၍ အရေးမပါဆုံး အမှူကိုနောက်ဆုံးမှပြူရန်အချိန်ဇယားကိုစနစ်တကျ ထားသင့်သည်။
ည တွင်စောစောအိပ်၍ မနက်စောစောထခြင်းသည်မှန်ကန်သောအချိန်အသုံးပြူနည်းဖြစ်၏။
နံနက်အာရုံတက်ချိန်သည် အလ္လာအရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှ ကရုဏာတော် ရရှိသောအချိန်ဖြစ်၍ အာရုံဦး ဝတ်ပြူမှူနှင့် နေ့သစ်ကိုစ သင့်၏။မွတ်စလင်များ အားလုံး မမေ့သင့်သည်မှာ အချိန်တိုင်းသည် တန်ဖိုးရှိ၍ တနေ့တာ၏အချိန်တိုင်းကို
ထိုအချိန်နှင့် သင့်တင့်သော အကျိုးရှိရာများကိုလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးသင့်ပေ၏။
အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာ အသုံးပြူခြင်း သည် နှစ်ဘဝ အတွက်အောင်မြင်ရန်လမ်း ဖြစ်သကဲ့သို့ အချိန်ဖြုန်း ခြင်းနှင့်တလွဲ သုံးခြင်း သည် ဤ လောကအတွက်ဆုံးရှုံးမှူသာမက တမလွန်ဘဝ အတွက် လည်းအစားမထိုးနိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှူဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရအန် ရဲ့ စူရာ ၁၀၃ မှာ အလ္လာအရှင်မြတ်က
“(ငါအရှင်မြတ်သည်) ခေတ်ကာလ (်အချိန်၊ အဆ်ွရ်ဆွလာတ်)ကိုသက်သေထူတော်မူ၏။
ဧကန်စင်စစ် လူသည် အမှန်ပင် ဆုံးရှုံးမှု၌ ရှိ၏။
အကြင်သူတို့မှတပါး ထိုသူတို့သည် (အီမာန်)သက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့ကြ၏။ ၎င်းပြင် ကောင်းမြတ်သောအကျင့်သီလများကိုလည်း ကျင့်မူဆောက်တည်ခဲ့ကြ ၏။ ထို့ပြင်အချင်းချင်း မှန်ကန်သော (သာသနာ ပေါ်၌ ကြံ့ခိုင်စွာ)တည်ရှိကြရန်လည်း ဆုံးမကြကုန် ၏။ ထိုမှတပါး ၎င်းတို့သည်သည်းခံကြရန်လည်း အချင်းချင်း ဆုံးမကြကုန်သတည်း။”
2 thoughts on “အစ္စလမ် နှင့်အချိန် ၏ သဘောတရား”
And you will surely find them the most greedy of people for life – [even] more than those who associate others with Allah. One of them wishes that he could be granted lifeathousand years, but it would not remove him in the least from the [coming] punishment that he should be granted life. And Allah is Seeing of what they do.(2:96)
အချိန်ကိုတန်ဘိုးရှိရှိအသုံးပြုတတ်ရန်အတွက် အထက်ပါအာယာသ်လေးက မီးမောင်းထိုးပြထားခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။ လောကီရေးတစ်ခုတည်းကို ရှာဖွေသူများအတွက် ၄င်းတို့အဖို့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင် လောကတွင် နေခွင့်ရ ပါသော်လည်း ၄င်းတို့အဖို့ ရရှိတဲ့သက်တန်းက အချည်းအနှီးပါဘဲ။ အမှန်တစ်ကယ် အချိန်၏တန် ဘိုးကိုတတ်သိနားလည်ပြီး ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ပြစနစ်ဇယားအတိုင်း လက်တွေ့ဘ၀တည်ဆောက်သူအဖို့ မည်မျှပင်တိုတောင်းသော သက်တမ်းလေးသာရရှပါစေ ထိုသူရရှိသော သက်တမ်းတိုတိုကလေးသည်ပင် သူ့ဘ၀အတွက်လုံလောက်ပေသည်။
Salam Sayar Lwin,